ထုတ်ကုန်များ > 7-Bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-one (17518-98-8)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် g / mol 257.92
မော်လီကျူး weightg / mol 259.487
အရည်ပျော်မှတ် (C) > 300
IUPAC name ကို 7-bromo-6-chloro-1H-quinazolin-4-One
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 2.0 +/- 0.1
ဓာတုနာမကိုအမှီ · CHLOROQUINAZOLIN-4 (3H) -ONE
အဘယ်သူမျှမ CAS 17518-98-8
ရေဆူမှတ် 481.8 mmHg မှာ 35 +/- 760
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 7-Bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-one (17518-98-8)
သင်သာသနာကို, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအကြီးအ Hustle ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့မလိုဘဲမည်သည့်ဓာတု purchasing စိတ်ဝင်စားပါသလား? အဘယ်သူမျှမကပိုစိုးရိမ်ပူပန်; APICMO အနေနဲ့တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးမြင့်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်မယ့်ဆေးဝါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အဖြစ်များသည့် Good Manufacturing Practice (CGMP) နှင့်အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအရသိရသည် 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One အပါအဝင်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ကျယ်ပြန့ထုတ်လုပ်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆီကဝယ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးကဲန်ဆောင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစား!
7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
ဒါဟာတစ်ဦး Off-အဖြူ whitecolor ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့အမှုန့်ပါပဲ။
rotate စဘွန်း 0
7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) အကြံပြုသိုလှောင်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်လက်အောက်တွင်ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် (NOx), ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန် decomposes ။
အတိအကျ Mass 257.92 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 41.5 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADcYBzIAAEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwQ
7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) ကို anticoccidial မူးယစ် (coccidiostat) halofuginone (Tempostatin) ထိုများ၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်မရှိမဖြစ်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါသည်:
ဒါဟာ anti-inflammatory နဲ့ anti-fibrotic အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
ဒါဟာတစ်ဦး inhibitorof ကော်လာဂျင်အမျိုးအစား 1 ဗီဇစကားရပ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်ထိုကြောင့်, အကျိတ်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုတားစီးနိုငျသညျ။
ဒါဟာ T ကအထောက်အ 17 ဆဲလ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတားဆီး။ ဤရွေ့ကား autoimmune ရောဂါအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင့်ခုခံအားဆဲလ်များမှာပေမယ့်ပုံမှန်ကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသော T ကဆဲလ်၏အခြားမျိုးမထိခိုက်ပါဘူး။
ဒါဟာအစ autoimmune ရောဂါကုသမှုအတွက်အထောက်အကူ။
7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) နဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်
ကမျက်စိမှ splashes တစ်ချိန်ကဒါဟာပြင်းထန်တဲ့မျက်စိယားယံသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေမျက်စိလာခြင်း, မျက်စိ-wateringand နာကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အရေပြားနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိသွားတဲ့တစ်ချိန်ကဒါဟာအရေပြားယားယံမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအသားအရေအဖု, ယားယံခြင်း, လာခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင်ကအသက်ရှူတစ်ချိန်ကဒါဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေချောင်းဆိုးခြင်း, တွေကအသက်ရှူ, မူးဝြေခင်းနှင့်တျရှုပျထှေးပါဝင်နိုင်သည်။
သငျသညျကိုင်တွယ်နေကြသည်ဓာတု၏ chemical.The ငွေပမာဏနှင့်အဆက်အသွယ်မှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပေးရန် impervious အဝတ်အစားဝတ်ဆင်နှင့်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသင်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်အကာအကွယ်အထည်ချုပ်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
EN166.You ဘက်ကလိုက်လျောညီထွေခြမ်းဒိုင်းရှိသည်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်မှန်ငါငသင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်အတည်ပြုကြောင်းမျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မာခ် 166 (အီးယူ) ။
သင်၏လက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။ သငျသညျကိုသူတို့ဓာတုဖြတ်သန်းစေခြင်းငှါမဆိုမျက်ရည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာသေချာမှအသုံးမပြုခင်ကသူတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းကြောင်းအာမခံပါသည်။ အဆိုပါလက်အိတ်ကိုဖယ်ရှားနေစဉ်, ဓာတုနှင့်အတူအသားအရေအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်ပြင်မျက်နှာပြင်ကိုထိစရာမလိုဘဲသင့်လျော်သောလက်အိတ်ဖယ်ရှားရေး technique ကိုသုံးပါ။ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်သင့်လျော်သောသန့်ရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများအရသိရသည်စနစ်တကျလက်အိတ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏လက်ကိုလျှော်သူတို့ကိုအခြောက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအီးယူညွှန်ကြားချက် 89 / 686 / EEC သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စံမာခ် 374 ကျေနပ်ကြောင်းလက်အိတ်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအမျိုးအစား P95 (ယူအက်စ်) ဓာတ်များကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်တားဆီးသို့မဟုတ် P1 (အီးယူမာခ် 143) အမှုန်အသက်ရှူကိရိယာရိုက်ထည့်ရန်။ သငျသညျပိုကောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးပြုခြင်းအမျိုးအစားကပိုထိရောက်ဖြစ်ကြောင်း OV / AG က / P99 (အမေရိကန်) သို့မဟုတ် type ကို ABEK-P2 (အီးယူမာခ် 143) အသက်ရှူကိရိယာသည့်အရာတစ်ခုလိုအပ်ပါ။ သင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်သက်သေပြခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု respiration ကိုသုံးပါ။
သငျသညျအငွေ့နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များစုစည်းနေခြင်းကိုလျှော့ချဖို့အလုပ်လုပ်နေကြသောဧရိယာ safein ဇီဝဖြစ်ကြောင်းအငွေ့ကိုတစုံတရာရှိတယ်လို့အာမခံပါသည်။
သင်သည်သင်၏စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်အဖြစ်မတော်တဆမှုရှောင်ရှားကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုခားဗီဒို Install လုပ်ပါ။
အတွက်အသက်ရှူလျှင်, သင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရှိကြောင်းပွင့်လင်းအရပ်မှချက်ချင်းလူတစ်ဦးကိုပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအခက်အခဲမရှိဘဲရှူဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအဆင်ပြေအနေအထား၌ထိုင်ကြပါစို့။ သားကောင်အသက်ရှုမထားလျှင်, သူတို့ကိုအတုအသက်ရှူပေးပါနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာကြာလော့။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသင့်အရေပြားရရှိသွားတဲ့လြှငျ, ညစ်ညမ်းစေခြင်းငှါမဆိုအဝတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ဆပ်ပြာနဲ့ရေတွေအများကြီးအတူဓာတုချွတ်ဆေးကြောပါ။ အမှု၌ယားယံဆရာဝန်တစ်ဦး၏အကြံပေးချက်ကိုရှာဆက်ရှိနေသေး။
အမှု၌ရေနှင့်အတူကရှင်းလင်းရန်, သင်၏နှုတ်ဖို့ရရှိသွားတဲ့။ တစ်ဦးသတိလစ်လူတစ်ဦးမှနှုတ်ဖြင့်ဘာမှပေးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်စိမှရရှိသွားတဲ့လြှငျ, ရေများများသူတို့နှင့်အတူသုတ်ခြင်း။ သင်သည်မည်သည့်ဝတ်ထားလျှင်မျက်စိအဆက်အသွယ်ဖယ်ရှားပါ။ အထက်နဲ့အောက်မျက်ခမ်းနှစ်ဦးစလုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မေ့လျော့မပေး 15 မိနစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့ရေကိုရှင်းလင်းရန်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးသင့်လျော်သောသန့်ရှင်းရေးအစီအမံမှညီ။ သင်ကတစ်ဦးနာကျင်ကျိန်းဖြစ်နိုင်သည်သကဲ့သို့သင်တို့အခိုးအငွေ့, ဖုန်မှုန့်, အခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ရှူရှိုက်ကြဘူးဆိုတာသေချာသင့်ပါတယ်။ သင်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ဖယ်ရှားပစ်ရပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြသောဧရိယာ၌သင့်လျော်သောလေဝင်လေထွက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒီဓာတုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်ထိတွေ့မှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သင့်အကာအကွယ်ဂီယာအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒါကြောင့်စားသုံးမိဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဓာတ်များစေခြင်းငှါအဖြစ်စား, အရက်သောက်ခြင်း, ဆေးလိပ်သောက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မတော်တဆမှုများအဖြစ်အပျက်၌သငျပွငျဆငျခွငျး nearbyto ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့် eyewash ရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ Spillage ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုယိုဖိတ်မှုဆံ့ဖို့မရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသောအားလုံးကွန်တိန်နာသေချာကောင်းစွာပိုမိုလွယ်ကူမှတ်ပုံတင်တံဆိပ်တပ်ထားသည်နှင့်သဟဇာတတ္ထုများနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာဖော်စပ်ကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့။
5. 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်
သင်ထုတ်ကုန်သုံးပြီးပြုပြီးတာနဲ့ကာကွယ်ဂီယာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်ဝတ်ထားသို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်ပယ်ရှေ့မှာဆေးကြောပါ။ သင်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခဲ့လျှင်ပင်ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု. ပြုပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုရှင်းလင်း။ တစ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုလျှော့ချရန်အလုပ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှပြောင်းကုန်ပြီပြီးနောက်အလုပ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး။ စနစ်တကျအပေါငျးတို့သကွန်တိန်နာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
spillage ကာကွယ်တားဆီးဖို့သည်၎င်း၏သိုလှောင်မှုကက်ဘိနက်ထဲမှာ set ခုံတန်းလျားထိပ်ပေါ်တွင်တဓာတုနေရာမထားပါနဲ့။ သငျသညျတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်သည့်ကွန်တိန်နာစောင့်ရှောက်သောအာမခံပါသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ကွန်တိန်နာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်များရှိလုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်နှင့် containersplaced ဝေးသဟဇာတတ္ထုများမှ them.Ensure ရယူမနိုင်ရှိရာတစ်ဦးအေးမြခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာဌာန၌တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ထားရှိရပါမည်။
7. 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One ကိုင်တွယ်နှင့်သိုလှောင်
လူအပေါင်းတို့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, ကောင်းသောစက်မှုဇုန်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအလေ့အကျင့်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်ဓာတုနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကွှလာမှသင်၏မျက်စိနှင့်အသားအရေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်အပေါငျးတို့သအကာအကွယ်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ တစ်ချိုးယူပြီးမီနှင့်ရှိသမျှသောအလုပ်ကိုတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာလက်အား Washyour ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းမှုနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်အတိုင်းဤဓာတုရေနုတ်မြောင်းသို့အရမသွားပါစေပါနဲ့။ ယားယံစေခြင်းငှါ Aerosol မြေမှုန့်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ထုတ်လုပ်လူအပေါင်းတို့သည်အငွေ့နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆံ့ဖို့လုံလောက်သော exhaustventilation စနစ်များရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
ဒါကြောင့် (အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူ) hygroscopic ကြောင့်ဓာတုသိမ်းထားဖို့အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့ (နိုက်ထရိုဂျင်သို့မဟုတ်အာဂွန်) နဲ့ပြည့်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါသည်သုံးပါ။ သင်တို့သည်လည်းပျောက်သဟဇာတတ္ထုများပါဝင်သောသူတို့အားအနေဖြင့်ကာလဖြစ်ပါသည် box.Store တစ်လက်အိတ်ကိုသုံးပါနိုင်ဘူး။ အဆိုပါကာလဖြစ်ပါသည်လုံးဝအတွက်ရတဲ့အနေဖြင့်ရေငွေ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့တံဆိပ်ခတ်ထားရမည်။ သူတို့ကအစကောင်းကောင်းလေဝင်လေထွက်သောခြောက်သွေ့တဲ့ဧရိယာထဲမှာထည့်ထားရပါမည်။ ထုတ်ကုန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်သောလုံခြုံရေးရရှိသွားတဲ့ကြောင်းအာမခံပါသည်။ အမြဲတမ်းကောင်းစွာတံဆိပ်ကပ်အားလုံးတ္ထုများစောင့်ရှောက်လော့။
မည်သည့် spillage ဖြစ်ပေါ်လျှင်, ထုတ်ကုန်ထက်တောင်ဦးနှင့်မြေမှုန့်ကိုမရှိဘဲစွန့်ပစ်ခြင်းကွန်တိန်နာထဲမှာထားပါ။ သငျသညျကအားလုံးကိုလှည်းနှင့်သင်စွန့်ပစ်ခြင်းကွန်တိန်နာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ပြီသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။ တင်းကျပ်စွာစွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအဆိုပါစွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။
မီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အောက်ပါ extinguishing မီဒီယာမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်:
အပူပိုင်းဓာတု / ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်
အန္တရာယ်ရှိသောအငွေ့, ဆိုလိုသည်မှာ, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်လိုအပ်သောလျှင် andfirefighters ထို့ကြောင့် Self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားဝတ်ဆင်ရန်အကြံပေးကြသည်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
9. sensitivity နှင့် reactivity ကို
bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) hygroscopic ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ရေနှင့်ဓါတ်ပြုပါသည်။ ဒါဟာနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ:
သင်တစ်ဦး afterburner နှင့် scrubber ရှိပါတယ်တဲ့ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာစွန့်ပစ်ကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်လောင်ကျွမ်းနိုင်သောကြောင့်စတငျခဲ့သညျစဉ်သတိတွေအများကြီးယူပါ။
ဓာတု၏ထုပ်ပိုးညစ်ညမ်းလျှင်တစ်ဦးအသုံးမပြုတဲ့ကုန်ပစ္စည်း pleasedisposeofas ။
7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-One (17518-98-8) အစုလိုက်သာသနာကိုနှင့်စျေးနှုန်း
အလန် R. Katritzky, စာမျက်နှာ 104 တည်းဖြတ် Heterocyclic ဓာတုဗေဒ, အတှဲ 482 တိုးတက်လာ။
ရှိသူများအတွက်ဓာတုဘေးအန္တရာယ်6၏ Bretherick ရဲ့လက်စွဲစာအုပ်ခုနှစ်တွင် Pitt, MJthed; Urben, PG Ed က; Butterworth-Heinemann, Ltd: အောက်စ်ဖို့, 1999; Vol.2, pp307-312 ။
Quinazolines, Desmond J ကိုဘရောင်း, စာမျက်နှာ 1 ခြင်းအားဖြင့်, 253 ဖြည့်စွက်။